SYCHEVSKAYA EE LO'DA: SIFOOYINKA, SAWIRRADA, FAA'IIDOOYINKA IYO KHASAAROOYINKA, DARYEELKA IYO DAYACTIRKA - XOOLAHA
Sychevskaya ku beeray lo'da leh sawirro iyo sharraxaad
Maanta way adag tahay in la qiyaaso nolosha caanaha iyo caanaha, sababtoo ah waxay noqdeen qayb ka mid ah cuntadeena.
Xitaa waagii hore, ninka ayaa ku guulaystay in uu soo saaro qarsoodiga asalka iyo caanaha, caleenta duurjoogta ah, idaha buuraha (awoowayaasha adhiga casriga ah) iyo riwaayadaha (awowayaashii lo'da) ayaa la dayactiray.
Dunida casriga ah, iyada oo loo marayo taranta iyo isbeddelada hidda-socodka, waxay ahayd suurtagal in la abuuro wax ka badan kun kalluun oo ah lo'da, in ka badan boqol jibbaar dhagxaan iyo in ka badan soddon geedka jilicsan. Markaas waxaan ka wada hadli doonaa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee lo'da gudaha, Sychevsky.
Xeryaha Sychevskaya ee lo'da waxaa lagu xannibay dhowr marxalado kala duwan iyo hababka xulashada inta lagu jiro wakhtiga ururinta bilawgii qarnigii 20aad.
Waxay ahayd kadib in dadaalka beeraleyda wadajirka ah iyo shaqaalaha sayniska ee gobolka Smolensk ay la socdeen wadajirka mideynta lo'da ee lo'da, taas oo ku salaysan tijaabooyinka lagu sameeyay wax ka bedelidda hidde iyo isgoysyada noocyada kala duwan.
Cows-ka ayaa la hagaajiyay iyada oo la isugu geeyay baaskiilkooda iyagoo la socda pool-ka Simental. Ka dib dhalashada tijaabooyinka ugu horreeya ee naasaha cusub, waxay baaritaan caafimaad oo dhammeystiran sameeyeen waxaana ugu fiican xulashada beeraha shakhsi ahaaneed.
Ma taqaanaa? Dufanka gaarka ah ee loo adeegsado qamrigu waa shidaal wanaagsan, iyo urta qasan ee soo baxa marka la gubo cayayaanka cayayaanka si aad u wanaagsan.
Waad ku mahadsan tahay qaabkan, cilmi-baarayaasha xannaanadu waxay ku darsadeen cawska Sychevskaya ee lo'da, taas oo lagu kala gooyey heerarka sare ee caanaha, hilibka, aan qabin xaaladaha cimilada iyo xaaladaha cimilada, iyo sidoo kale difaaca sare ee noocyada cudurrada iyo cudurada kala duwan.
Sharaxaad iyo sawir
Macluumaadka dibedda ee lo'da Sychevsky si buuxda u dhigma fahamka caadiga ah ee muuqaalka hilibka iyo lo'da caanaha.
Muuqaalka iyo xuduudaha
Ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya lo'da iyo digaagga, iyo sidoo kale kuwa yaryar, farqiga u dhexeeya qiyaasta kaliya.
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada ugu fiican ee caanaha iyo hilibka lo'da.
Bulls waa ka weyn tahay lo'da iyo xoogaa ka xoog badan. Dharigooda xooggani wuxuu si buuxda u daboolayaa murqaha xoogga leh ee u ogolaanaya xayawaankan in ay si dhaqso ah u socdaan, in kasta oo ay dhisme xoog leh, oo ay ka qaybqaataan dagaalka dagaalka. Midabka xayawaanka noocan ahi waa ciriiri, cawlaan ama casaan.
Gabdhaha caanuhu waxay gaari karaan hal mitir iyo badh, dhererkoodu way kala duwan yihiin 155 illaa 187 cm Qalabkuna waa mid ballaaran oo ballaaran, oo leh laba gees oo curdun ah. Baaxadda laabta ayaa ku kala duwan 63 iyo 85 cm. Maqaarku wuxuu ka kooban yahay dhumuc dhexdhexaad ah, oo siman, daboolan adag oo jilicsan. Celceliska miisaanka qashinka Sychevskoy wuxuu gaari karaa 900 kg.
Ma taqaanaa? Maalmihii hore waxaa la rumaysan yahay in iibinta qadar jirran ay u horseedi karto soo kabashada.
Cowsku waxay leeyihiin musqulo yar oo qafiif ah iyo qiyaas yar oo ka yar qiyaasaha. Dharbaaxada dheddigga waa mid joogto ah, xitaa qaab, oo leh geesinimo geesinimo leh iyo croup. Midabka - boodhka, cirridka cas, casaan, marar badan - casaan-guduud. Dhuxul - silkeed, gaaban, waxoogaa yar yareeyo taabashada marka loo eego ragga.
Dhererka caanaha ee lo'da waxay gaartaa 125-137 cm, dhererka jirka wuxuu ku dhawaad ​​yahay mid aad u siman oo ka kooban 140 illaa 175 cm .Fidaanka laabta ayaa marar dhererkeedu ka badan yahay 75 cm. Maqaarku wuxuu ka kooban yahay dhumuc dhexdhexaad ah, wuxuu leeyahay jilicsanaan iyo jajab fudud.
Celceliska miisaanka dheddigga ee Sychevsky wuxuu kala duwan yahay 550 ilaa 600 kg. Udder si wanaagsan ayaa loo horumariyey, halkii baaxad weyn, oo jilicsan oo jilicsan.
Calooshu waxay culeyska ku kici karaan celcelis ahaan 800-1200 garaam maalintii. Calaamadaha miisaanka ee sychevsk dhasha - 30-34 kg. Marka ay gaaraan lix bilood waxay gaaraan culeys 200 kg ah. Marka uu gaaro da'da hal sano iyo badh, calabaha wuxuu miisaamaa celcelis ahaan qiyaastii 350-400 kg.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido waxa ku jira cunnooyinka fitamiinada ay u baahan yihiin koritaanka degdegga ah, sida loo doorto kubbada wanaagsan marka aad soo iibsaneyso, sidoo kale waxaad ogaataa waxa la sameeyo haddii uu kubbadu caajis tahay oo aan fiicnayn.
Hilibka iyo sifooyinka caanaha
Qodobada hilibka iyo caanaha ee sirdoonka Sychevsk ee lo'da ayaa lagu soo koobi karaa miiska soo socda:
Caano caanaha sanadkiiba laga bilaabo 4 ilaa 5 tan
Dhadhamiya caanaha Macmacaan, midab leh, oo aan dhadhan dhadhan leh iyo urin
Fat laga bilaabo 3.5% ilaa 4%
Protein min 3.2% ilaa 3.6%
Maqnaanshaha miisaanka koritaanka laga bilaabo 800 ilaa 1200 garaam maalintii
Goynta geela 58%
Tayada hilibka Heer sare Hilibka hilibka, oo leh lakabyo buluug ah
Sannadkii 1950, heerka jaaniska Sychev waxaa lagu diiwaan geliyey diiwaanka waxaana si rasmi ah loogu aqoonsaday dhulka Midowgii Soofiyeeti. Waqtigaas, lo'dooyinkan waxaa lagu ridayaa Bryansk, Ryazan, Kaluga, iyo sidoo kale Jamhuuriyada Moldova iyo Belarus. Maanta, lo'dooyinkan waxaa lagu xannaaneeyaa beeraha taranta ee gobollada Smolensk, Kaluga iyo Tver. Ka shaqee casriyeynta iyo horumarinta noocyada sii socota ilaa maanta.
Tirada faa'iidooyinka aan la isku halleyn karin ee sirdoonka Sychevsk ayaa si dhib yar loo tirin karaa:
dhalidda sare ee hilibka hilibka;
korodhka wax soosaarka;
daryeel aan qabyo ahayn;
fududaynta la qabsiga xaaladaha cimilada ee kala duwan;
caabbinta xaaladaha deegaanka ee xun;
difaac sare ee cudurrada kala duwan.
Waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah inaad ka akhrido sida loo qaato lo'da cawska, sida si habboon loogu quudiyo lo'da daaqa, iyo sidoo kale ogaado waxa go'aaminaya culeyska lo'da.
Laakiin waxaa jira hoos u dhac.
Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah faa'iido darrida of this this:
Xayawaanka yaryari waxay u baahan yihiin cunto badan, sababtoo ah la'aanta nafaqooyinka ee naas-nuujinta uuraysatay waxay keenaysaa muuqaalka iyo horumarka rickets;
ee lo'da ku nool wakhtiga ugu horreeya, dhalmada adag waxay badanaa u dhacdaa sababtoo ah xajmiga weyn ee madaxa kubka, taas oo inta badan keenta dhaawacyo kala duwan oo ah oogada ama dumarka.
Daryeelka iyo raashinka quudinta
Inkasta oo ay fududahay guud ahaan iyo shuruudaha hoose ee shuruudaha noolaha iyo daryeelka, weli waxaa jira xeerar qaar ah oo lagu taliyey in ay si adag u raacaan.
Taabo yar waa inuu ahaadaa mid ku filan si uu lo'du si xor ah u galo iyo, haddii loo baahdo, 90 darajo. Qiyaasaha cabbiraadda dhagta - aan ka yarayn 2x2 m.
Qalabka loo isticmaali doono dhismaha waa inuu noqdaa mid dabiici ah. Waxaa fiican inaad qaadato geed, rinjiso wax aan loo baahnayn.
Guryeynta waxaa sidoo kale lagu talinayaa in laga dhiso kuraasta ama xayndaabyada qoryaha. Shuruudda ugu weyn ee taarikada la riixay waxay noqon doonaan sunta adkeysiga uumeysiga leh, haddii kale miisaankoodu yahay xayawaan weyn iyo qoyaan badan oo noocan oo kale ah ayaa si dhakhso ah u noqon doona mash. Maqnaanshaha ugu fiicnaanta dhulka waa 5 cm.
Waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho caws ama caleenta sariirta. Miisaanka barkinta ayaa ku xiran darnaanta dhaxanta. Dareerku wuxuu ku yaalaa wadada, aad u raaxeysanaya waxaad dabooli kartaa dabaqa. Iyo sidoo kale.
Jajabiyaha iyo cabitaanka khamriga ayaa si wanaagsan loo dhigaa gudaha lafta si ay u noqoto mid aan dib u celin karin ama aysan ku dhicin. Ku xirtaa berkadaha alwaaxa leh geesaha laysku qurxiyo (sidaa daraadeed xayawaanka ma dhaawacmin). Waxa kale oo aad isticmaali kartaa weelasha caag ah ama bir ah. Shuruudaha ugu muhiimsan ee cabitaanku wuxuu noqon doonaa awoodiisa, sababtoo ah sac ayaa si fudud u cabi kara baaldi biyo ah toban daqiiqo.
Iyadoo ay ugu wacan tahay isbedelka fudud ee heerarka kala duwan ee cimilada iyo xaaladaha cimilada, noocaani waa gebi ahaan aan la qabin. Waxay u adkeysan kartaa kulaylka 40-degree, iyo baraf aad u daran. Xilliga kulul, waxa ugu muhiimsan waa in la hubiyo in ay jiraan had iyo jeer biyo kuleylaha cabitaanka, waana wax aan loo baahnayn in laga tago lo'da ee cadceedda furan. Waa in looga tagaa daaqsinka dhulka leh meelaha hadhaysan - sidaas darteed lo'da waxay awoodi doontaa inay xakameyso xaaladdeeda iyo, haddii loo baahdo, geli hooska. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha, waa suurtogal in heerkulka ee barn inuu hoos u dhaco -5 ° C.
Waa muhiim! Xayiraadda huurka - sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha. Xayawaanka waa inaysan ku jirin qolal culus iyo qolof adag, sidaas darteed qalabka hawuhu wuxuu noqon doonaa tallaabo aad u haboon.
Nalalka iftiinka: 12 saacadood - maalin, 12 saacadood - habeen. Xilliga gu'ga xilliga qaboobaha ilaa horraanta gu'ga, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la sii dheereeyo iftiinka, xagaaga ma jirto baahi, laakiin haddii laydhku iftiimiyo barnad si fudud, ma saameyn doonto xayawaanka. Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha in la iloobo in la damiyo iftiinka si ay xayawaanku si degan u seexdaan.
Nadiifinta iyo jeermiska dhismaha iyo qalabka
Waxaa lagu talinayaa in la nadiifiyo marinka laba jeer maalintii: subaxda iyo fiidkii. Nadiifinta noocan oo kale ah waxaa ka mid ah tijaabada saxarada iyo maaraynta, beddelidda hababka gogosha iyo qubeyska ee xayawaanka. Isticmaal burush jilicsan, xashiishad daciif ah iyo biyo si aad u dhaqdo lo'da ka dib habeenkii si marwalba nadiif ah oo hagaagsan.
Xannibidda quudinta iyo cabitaanada waxay sidoo kale u baahan yihiin in la nadiifiyo si ay bakteeriyada waxyeelo badan u bilawdo. Cunto kasta ka dib, nuujiyeyaasha waa in la nadiifiyaa qashinka cuntada, iyo cabitaanka cabitaannada waa in la nadiifiyaa hal mar maalintii. Nadiifinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo diyaargaroowyo gaar ah oo lagu buufiyo hawada si loo nadiifiyo. Nidaamkan waxaa lagula taliyaa ugu yaraan toddobaadkii hal mar.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cayayaanka iyo caanaha sida lo'da sida Yakut iyo Krasnogorbatov.
Cunto iyo biyo
Xilliga xagaaga, cuntada aasaasiga ah ee lo'da waxay ka kooban tahay cawska daaqa, taas oo xayawaanku ku cuni karo tiro xadidan. Lo'da lafteedu waxay si fiican u xakamaynaysaa inta cuntada la cuno, si markaa mulkiiluhu uga qeyb qaato arrintaan looma baahna.
Waxay ka timid cawska in xayawaanka ay helaan dhammaan macdanta lagama maarmaanka ah, fitamiinnada iyo qaybaha kale ee nafaqada. Sida ragga, iyaga oo intaa sii dheer waxay soo bandhigeen quudinta si ay u ilaaliyaan awooddooda jidheed iyo dulqaad. Xilliga jiilaalka, sacadu waxay cunaan silage iyo hay, taas oo horey loo soo goostay xagaaga. Halkan waxaa jira qawaani ku talinaysa in ugu yaraan saddex bilood ay u dhex maraan beerta iyo bilowga isticmaalka dhismaha iyo silage.
Fitamiin iyo macaadin la'aan xilliga qaboobaha waxaa magdhow laga helayaa cuntada lagu daro xarumaha gaarka ah (tusaale, "Trivita"). Si ay u buluugyada si gaar ah loo quudiyo si loo gowraco, 1-2 kg oo feed ah ayaa lagu daraa maalin kasta oo ku yaala menu. Sida biyaha, qawaaniinta ugu weyni waxay tahay in ay tahay in had iyo jeer ay ku dhex jirto cabitaanka khamriga oo si joogto ah loogu beddelo biyo cusub.
Waa muhiim! Marka lo'da daaqa inta lagu guda jiro barafka ugu horeeya ee ka soo jeedda waxaa la saaraa kaliya marka uu barafku ka yimaado cawska.
Sychevskaya ee lo'da ee lo'da ayaa noqday mid ka mid ah doorashooyinka ugu wanaagsan ee lagu qabtay dunida. Illaa iyo maanta, wakiilladeeda waxaa si firfircoon loogu soo bandhigaa wadamo badan oo ka mid ah meelaha ay ku yaalaan xarrumaha, iyada oo si aan macquul aheyn u buuxineyno qaboojiyeyaasheena oo leh waxyaabaha caanaha laga sameeyo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xoolaha 2019